Adolf Hitler meriri na ntuli aka ime obodo na Namibia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Namibia » Adolf Hitler meriri na ntuli aka ime obodo na Namibia
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Namibia • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Dị ka akụkọ si Namibia, onye bụbu onye Germany na-achị, otu nwoke aha ya bụ Adolf Hitler emeriela ntuli aka ime obodo n’oke oke mmeri.
Ozi ọma ahụ bụ na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Namibia aha ya bụ mgbe Nazi Germany nwụrụ Führer kwuru na ya enweghị atụmatụ maka ịchị ụwa.
Adolf Hitler Uunona gbara ọsọ na tiketi nke SWAPO Party nke Namibia na-achị. Ọ dọtara votu 1,196, ma e jiri ya tụnyere 213 maka onye iro ya, wee nweta oche na kansụl na-achịkwa mpaghara Oshana. Mpaghara Ompundja, nke ọ na-anọchite anya, nwere ihe na-erughị ndị bi na 5,000 ma bụrụkwa ndị a na-ele anya dị ka ebe siri ike SWAPO.
Uunona gwara ndị German tabloid Bild na n'adịghị ka aha aha ya, ọ nweghị ọchịchọ maka ịchị ụwa, ma ọ bụ ọbụna maka mmeri nke Oshana.
“Papa m gụrụ m nwoke a. Eleghị anya ọ ghọtaghị ihe Adolf Hitler guzoro, “ọ kọwara. O kwuru na ọ na-agakarị Adolf Uunona nakwa na ọ ga-aka oge ugbu a ịgbanwe aha ya.
Namibia bu obodo no na odida odida anyanwu nke ndida Africa. Obodo ahụ bụbu obodo nke Germany ma soro mba Europe nwee ọtụtụ aha n'okporo ámá na aha ezinụlọ.
O meriri nnwere onwe zuru oke na 1990, mgbe ọtụtụ iri afọ nke ịlụ ọgụ megide ikike nke apartheid South Africa.
SWAPO malitere dị ka onye na-akwado nnwere onwe ma bụrụkwa onye ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị kemgbe mba ahụ ghọrọ eze zuru oke, n'agbanyeghị na ewu ewu ya belatara afọ ole na ole gara aga.
A na-eme atụmatụ na ihe ruru mmadụ 1,200 ka na-akpọ aha Hitler taa, ọtụtụ n'ime ha anaghị ewere ndị ikwu nke onye ọchịchị aka ike Nazi.
Ezigbo ndị òtù ezinụlọ na-eche na ha gbanwere aha ha mgbe agha ahụ gasịrị iji zoo njikọ ọ bụla na onye ndu ndị fasizim.